Izindaba - 2020 Global Baby Stroller and Stroller Market Analysis, Type, Application, Forecast kanye ne-COVID-19 Impact Analysis 2025
Ukuhlaziywa Kwemakethe Yezingane Yama-2020 kanye ne-Stroller Market, Uhlobo, Isicelo, Isibikezelo kanye ne-COVID-19 Impact Analysis 2025
I-stroller stroller kanye ne-stroller emakethe yomhlaba wonke ngonyaka we-2020, ehlukaniswe ngabakhiqizi, isifunda, uhlobo kanye nokusetshenziswa kwayo, ibikezela umphumela omuhle kakhulu kokhonkolo, izindlela zokuhlanganisa kanye nobuchwepheshe bamuva ngo-2025. Umbiko ukhomba futhi uchaze ubukhulu bemakethe ngayinye ukuze kuhlolwe okuphuma okunengqondo, okungenzeka setha umkhombandlela wokukhula wemakethe yezingane ehamba ngezinyawo nemakethe yezinqola. Umbiko wenze ukuhlaziywa okuphelele kwesakhiwo semakethe futhi kwahlolwa izingxenye ezahlukahlukene zemakethe kanye nezingxenyana ezingaphansi komkhakha. Ngosizo lwalo mbiko, abafundi bazokwazi ukwenza isinqumo sokugcina ngeziphetho ezingaba khona zezici ezibalulwe ngenhla, eziqhuba ukukhula okuqhubekayo kwemakethe yomhlaba. Ngalo mbhalo wocwaningo, kuzoba lula ukusungula nokwenza ngcono isigaba ngasinye senqubo yezimboni kubandakanya ukubamba iqhaza, ukutholwa, ukuzibamba nokwenza imali.
Lo mbiko uhlukanisa imakethe yezitoliloli neyabahamba ngezinyawo ibe yizingxenye eziningana zemakethe ezisemqoka ngokuya ngemfanelo, imisebenzi, izinhlelo nezinhlobo. Lolu lwazi luzosiza abangenayo abasha nabadlali abasafufusa baqonde ukwakheka okuphelele kwemakethe futhi bathole imininingwane ngemikhiqizo nezinsizakalo ezahlukahlukene ezitholakala emakethe. Lo mbiko uqukethe nemininingwane eningiliziwe ngezigaba ezisemqoka zemakethe ezingahola noma ziqhube yonke imakethe ngesikhathi sesimo sezulu kusukela ngonyaka wezi-2020 kuya kowezi-2025. Akungabazeki ukuthi izinkampani zithembele kakhulu ezigabeni ezahlukahlukene zemakethe ezimbozwe yimibiko yocwaningo lwezimakethe, ngakho-ke lo mbhalo ubanikeza imininingwane engcono yokuqhubela inkampani ngendlela efanele. Izici ezijwayelekile ziphinde zibhekelwe ukwehlukaniswa, okufana nokwabelana ngemakethe yomhlaba, izintshisekelo ezivamile, ukufunwa komhlaba wonke, nokunikezwa kwabahamba ngezinqola nabahamba ngezinqola.
Qaphela: Umbiko wethu ugxile ezinkingeni ezinkulu nasezingozini izinkampani ezingabhekana nazo ngenxa yokuqubuka okungakaze kube khona kwe-COVID-19.
Abadlali abakhulu abasebenza emakethe yezitiloli yomhlaba kanye ne-stroller: iGoodbaby, Mybaby, Artsana, Combi, BBH, Seebaby, Emmaljunga, Shenma Group, Newell Rubbermaid, Aing, Dorel, UPPAbaby, ABC Design, Hauck, Stokke, Peg Perego, Roadmate
Imakethe ehlukanisiwe ngohlobo, imikhiqizo ingahlukaniswa: isitiloli esisodwa, abahamba ngezinyawo abaningi, abahamba ngezinyawo
Imakethe ehlukaniswe ngohlelo ihlukaniswe: ngaphansi konyaka owodwa ubudala, iminyaka engu-1 kuye kwengu-2.5 ubudala, nangaphezulu kweminyaka engu-2.5 ubudala
Ngokwesigaba sezifunda, imakethe ihlukaniswe yaba izifunda eziyinhloko ezilandelayo: INyakatho Melika (i-United States, iCanada neMexico), iYurophu (iJalimane, iFrance, i-United Kingdom, iRussia ne-Italy), i-Asia Pacific (iChina, iJapane, iSouth I-Korea, India kanye ne-Southeast Asia), i-Ningizimu Melika (iBrazil, i-Argentina, njll), iMiddle East kanye ne-Afrika (Saudi Arabia, Egypt, Nigeria neNingizimu Afrika)